Ny Tany Masin'ny Fikarohana Viet Nam - NY TENY MASINA - Ny Tany Masin'i Vietnam fandalinana
3836 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
Ny anaran'i NY TENAN'ANDRIAMANITRA FIANARANA VIET NAM dia avy amin'ny fihetseham-po amin'ny mpikaroka marobe ao Fandalinana Vietnam izay mipetraka any Vietnam ary any amin'ireo firenena vahiny.
Ny Birao manamboatra boky dia mahazo alàlana hametraka tranokala misy ny anaran'i Ny Tany Masin'i Vietnam Studies - thanhdiavietnamhoc.com izay misy fandraisana anjara marobe avy amin'ny mpikambana ao aminy araky ny torolalana an'ny Ny Profesora mpiara-miasa, ny Dr. Nguyen Manh Hung.
2.1 Ilay tany masina
Ilay tany Masina, tany no ilazana azy soatoavin'ny kolontsaina azo tsapain-tanana sy tsy hay aseho amin'ny fomba maoderina milaza fomba na kolontsaina ara-nofo, fanahy amin'ny fomba nentin-drazana milaza fomba izay naorin'ny razambentsika tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny tantara ary nifototra tamin'ny ampahany tamin'ny eritreritra ara-tsaina tao amin'ny fiarahamonina Vietnamianina. Amin'izany toe-javatra izany eritreritra momba ny lalàmpanorenana nivadika ilay ady nentin-drazana sy tsy nentim-paharazana mba hamporisika ny tantara.
2.2 Ny Tany Masina Fandalinana any Vietnam - Sary manan-tantara
Hatramin'ny nitifanan'ireo mpanjanantany frantsay ny ranomasina tany Danang tamin'ny taona 1858 ary nibodo an'i Cochinchina ary nampiasa azy ho zanatany mba hahitanany rojo sakafo”Tany Far - Orient Asia izay nanondro an'i Napoleon. Fampisehoana fomba iray ho an'ny vondrona "Requin" na antsoina hoe "mpanam-bola"- fizarana ao amin'ny vondrona ara-bola frantsay.
Araka ny fantatra amin'ny teny Vietnamianina, ny tany masina any Vietnam tsy ela dia niova ho sehatry ny oniversite antsoina hoe Vietnam miaraka amin'ny tambajotra manaparitaka firenena sy faritany manerantany. taloha, ny tambajotra Viet Nam Studies nandinika an'i Eropa, indrindra i Frantsa, Japon, China ary Etazonia izay toerana nisy ny fandraisana anjara tamin'ny tantaran'i Vietnam izay nosoratana matetika. Matetika dia fandaminana iray an'ny Euro-Viet.
Tamin'ny alàlan'ny seminera an-trano maro, izay misy andian-teny iray Studies Nam narafitra ho toy ny indostria akademika manarona ny soatoavina azo tsapain-tanana sy ny tsy hay tohaina ao amin'ny firenena Vietnamianina izay nekena.
Nisy ny fiaraha-miory iraisam-pirenena tamin'ny Nandalina i Viet Nam tany Vietnam tamin'ny taona 1988 izay nahatonga an'i Euro-Viet dia fantatra ho toy ny indostria akademika mifototra amin'ny renirano. Io toerana io izay namorona ny olona manana lanja ara-kolontsaina tsy maivamaivana rehefa mijoro miaraka amin'ireo indostria mitovy, raha tsy mamiratra kosa, ohatra, i Japan dia mandalina ny fanadihadiana any Korea, ny fanadihadiana any Azia Atsimo Atsinanana.
Ankoatr'ireo Vietnam ity dia nandray anjara tamin'ny kolontsaina lehibe sasany toa ny Mianatra any Sina, Nandalina India, Ny Etazonia. fandalinana na fandinihana Orient, Fianarana any Pasifika...
2.3 Ny Tany Masina Fandalinana Vietnam - Devêlopment, Integration, Fomban-drazana sy haitao maoderina
Miverina amin'ny 1998, Nandalina i Viet Nam nekena ho «lohatenin'ny fianarana». Raha ny antontan'isa dia firenena 27 ary 300 ny mpahay siansa iraisam-pirenena Nandalina i Viet Nam izay namirapiratra teo amin'ny lampihazo.
Tamin'ny andron'ny Kongresy no lohahevitra "Mikaroka an'i Viet Nam sy ny fampandrosoana iraisan'ny sehatra iraisam-pirenena" nahitana komity miisa 15 misy adiresy 395. Ny lohahevitra nifandimby tamin'ny 2004 dia “Fampandrosoana, fampidirana, fomba nentim-paharazana ary maoderina". Tamin'ny taona 2008 ny andro fahatelo tamin'ny fianaran'i Viet Nam dia nisy teboka roa "Fampidirana sy fampandrosoana". Taorian'izay tamin'ny 2012 dia mbola misy teboka afovoany teo aloha fa mandroso fahatsapana vaovao momba an'i maharitra.
Ny andro fahadimy tamin'ny fanadihadiana ny Viet Nam University University any Hanoi nanainga ny sain 'i Nandalina i Viet Nam. Izy io dia niasa ho mpanohana ara-panahy mba hifandray amin'ny fikambanana akademika sasany toy ny Academy of Vietnamese Social Science, Academy of Vietnamese and Science and Technology, Ho Chi Minh City National University, Ministry of Education and Training, Ministeran'ny Science and Technology, Ministry. ny raharaham-bahiny, minisiteran'ny kolontsaina, fanatanjahantena ary fizahan-tany, minisiteran'ny indostria sy ny varotra, minisiteran'ny drafitra sy ny fampiasam-bola, minisiteran'ny fambolena sy ny fampandrosoana any ambanivohitra, minisiteran'ny asa, ady tsy ara-dalàna ary fiahiana ara-tsosialy, minisiteran'ny loharanon-karena sy ny tontolo iainana. Toa izany rehetra izany "mikoriana ao anaty hollows ny rano".
Ny lohahevitra mikendry ny teboka afovoany "Fampandrosoana maharitra amin'ny tontolon'ny fiovan'ny tontolo". Nalamina tao anaty 12, 2016. Eto dia nampiaiky ny lafiny maro ny fanadihadiana an'i Viet Nam: kolontsaina, politika, fiaraha-monina ary komity marobe manana teboka afovoany no natsangana: Raharaham-bahiny, fiaraha-miasa, fifanarahana iraisam-pirenena (subkomite 1), hery ara-kolontsaina (subkomite 2), fanabeazana sy fampivoarana loharanom-pahefana (Subcommiture 3), fandefasana ny fitsipi-pahaizana sy teknolojia (Subkomite 4), toekarena ary fomba fanohanana (Subkomite 5 ), Fiovan'ny toetr'andro (Subkomitey 6).
Sary 1: seminera siantifika momba ny fianarana any Vietnam tamin'ny taona 2016 (loharano: vnu.edu.vn)
Noho izany, Nandalina i Viet Nam dia nitombo sy nandrakotra ireo olana mampiseho fa ny vahoaka Vietnamianina dia miakatra eo ambany mason'ireo olona akaiky azy, indrindra fa ireo firenena lehibe, isaky ny "mpamono olona"An'ny"mandao ”. Ity zavatra ity dia toa mifandray amin'i Vietnam amin'ny alàlan'ny «fitiavana ny tantara”Ary ny fanomezam-pahasoavana dia ilay fitiavana an'i "Vy sy fipoahana"?
2.4 Ny Tany Masina Fandalinana any Vietnam - Rafitry ny sanda ara-biolojika an'ny fandalinan'ny olombelona.
Afaka nanontany ny vahoaka Vietnamese. Iza no fahavalony? Ity dia fika hafahafa izay efa zatra taloha ka lasa olombelona nieritreritra izay manaja Vietnam - ny tany masina ary rafi-pampianarana ekolojika momba ny olombelona.
2.5 Ny Tany Masina Fandalinana Vietnam - Teknolojia sy ny fanovana toetrandro
In 5th Kongresin'ny Fikarohana Viet Nam, Afaka manohana ny tenany i Vietnam, noho izany dia afaka miditra any amin'ny faritra voatokana ho amin'ny fanatanterahana ny fomba nentim-paharazana toy ny siansa sosialy sy ny olombelona mba hanokatra varavarana. fanafahana ny faharanitan-tsaina na lafin-javatra vaovao na "Teknolojia sy fanovana toetrandro".
Ny fiovan'ny toetr'andro tsy vitan'ny hoe mamono ny ain'ny vahoaka vietnamiana fotsiny fa mety hiteraka ny zanak'olombelona iray manontolo hijoro eo amorom-pandringanana. Vietnam dia toy ny gadona ao am-pon'ny vatan'olombelona.
2.6 Fianarana Vietnam - Fampiasa ara-teknika
Ny fanontaniana iray dia mieritreritra toy ny eritreritra azo ampiharina amin'ny fandinihana an'i Viet Nam. "Aiza no misy an'ity indostria ity?" ary inona ho an'ny? Sa misy mihetsika?
Nisy rindrambaiko momba ny “Fiterahana sambatra". Ny vorona Vietnam dia mivoaka amin'ny fantsom-pako toy ny rano fantson-drano nefa ny olon-kafa namorona azy. Izany dia fananana ara-tsaina.
Sary 2: Vorona Flappy - Nguyen Ha Dong 2014 (loharanom-baovao: kenh14.vn)
Ny maty teo no ho faty. Na dia miaina eo amin'ny fanajana an'izao tontolo izao aza izy io dia toy ny hoe phoenix. Ny mpikaroka momba ny Viet Nam dia mianatra nametraka fanontaniana: Fa maninona no tsy nanolo an'io fantsona io tamin 'ny "Sampana miolakolaka" any ambanivohitra Vietnam?
2.7 Ny Tany Masina Fandalinana Vietnam - Zavamananaina Lotus pistil
Nahoana no Nandalina i Viet Nam? Ny fanontaniana dia mahatonga ny mpikaroka momba ny fikarohana Viet Nam fa manana valiny hafa. Rehefa ny Filoha Barack Obama Etazonia nitsidika Pagoda Ngoc Hoang nandritra ny fitsidihany an'i Viet Nam tamin'ny 24/05/2016, dia maro ny fanontaniana avy amin'ny mpikaroka marobe momba ny fikarohana Viet Nam. Inona no Pagoda Ngoc Hoang manana? Ary inona no anton'izany? Marina ve fa i Obama miaraka amina fotsifotsy mainty dia nankany mba hivavaka amin'ny zaza, a zazalahy na zazavavy, ho fanomezana amin'ny fotoana fisotroan-dronono "Amin'ny firenena niaviany."
Sary 3: Nitsidika an'i Ngoc Hoang Pagoda i Obama (loharano: giacngo.vn)
Ny indostrian'ny Nandalina i Viet Nam avy amin'ny University of California Berkeley, Etazonia (jereo ilay tarehimarika) dia nampiasa antontan-taratasy momba ny fanadihadiana Viet Nam. Amin'izany fotoana izany ny Profesora Peter Zinoman (jereo ilay tarehimarika), ilay mpikaroka momba ny fikarohana Viet Nam dia nanomana andalana vitsivitsy ho azy.
Sary 4: University of California Berkeley (loharanom-baovao: scholarship.net)
Sary 4: Peter Zinoman (loharanom-baovao: nhipcaudautu.net)
Ity dia andininy iray amin'ny mpitendry mozika roa Van Cao ary Trinh Cong Son. Izy koa dia nikarakara ny fitsidihana an'i Ngoc Hoang Pagoda.
Ny zava-drehetra dia misy ny "zava-mahadomelina piste”Tany amin'ny heniheko any Vietnam.
"Zana pistil"Dia azo heverina ho karazana akora"Natao tany Viet Nam”Mba hamoronana tambajotra fikambanana toy ny tranokala halain'ny Viet Nam mba hampifandraisana an'i Viet Nam amin'ireo ivon-toerana lehibe kokoa avy amin'ny firenena sy faritany maro eto amin'izao tontolo izao.
Sary 6: Trinh Cong Son sy Van Cao (loharanom-baovao: petrotimes.vn)
Ny tranokala: thanhdiavietnamhoc.fr no raim-pianakaviana ary amin'ny teny anglisy dia Holylandvietnamstudies.com raha toa izy ireo nanao antsoantson'izy ireo mpikaroka amin'ny fikarohana Viet Nam trano hijanonana amin'ny trano.
Mpikaroka amin'ny fikarohana Viet Nam alefaso azafady ny lahatsoratrao!
Version Dikan-teny vietnamiana: Thánh địa Việt Nam học - Vùng đất thánh
(Visited 1,913 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Mitady ny "VO COC"
La COCHINCHINE na Nam Ky →
Comments Off ao amin'ny Vondron'olona SAN CHAY misy foko etnik 54 any Vietnam
Comments Off amin'ny HA TIEN - Cochinchina
Comments Off momba ny tantaran'ny TU-THUC - Ny tanin'ny fahasambarana - fizarana 2
Comments Off amin'ny GIA ĐINH - Cochinchina
Fitsidihana anio: 351
Andro farany 7 nitsidika: 2,326
Total visits: 420,577